Ọ rụpụtara bọlbụ ọkụ nwere ike iji ya rụọ ọrụ afọ 80 - Afrikhepri Fondation
Ọ mepụtara bọlbụ nwere ike iji ya rụọ ọrụ afọ 80
Ebulu ahụ ebighebi
Ọnwa ole na ole gara aga, Benito Muros, onye ọchụnta ego Spanish, onye na-emepụta bọlbụ ebighebi, nke edepụtara na-enweghị mkpokọta atụmatụ, kwupụtara mwepụta nke usoro ka mma, na-ede. ABC.es. Amalitere afọ abụọ gara aga, bọlbụ ọkụ IWOP ("M, na-enweghị opsolescense") nwere nnukwu ntọala ma nwee ike ịzụta ya na Internetntanetị ma ọ bụ na ụlọ ahịa Barcelona na ọnụahịa nke euro 33,88 (gụnyere VAT). Ngwurugwu a na-eji teknụzụ LED, enwere ike idozi ya na oriri ya bụ 3,5 Watt maka ihe nchapụta nke ya na nke bọlbụ 90-100 Watt.
A na-arụpụta ụdị IWOP ọhụrụ na Catalonia: na Girona, etinyere ihe ndị ahụ, ngalaba nyocha na mmepe dị na Barcelona na ngalaba nke Igualada na-elekọta ma na-echekwa ebe nchekwa. , obodo dị na mpaghara Barcelona.
Benito Muros bụ mmalite nke nzukọ ndị Spen Sin obsolescencia programmada "(SOP," Enweghị nhazi oge nhazi ") nke katọrọ mmachi nke" ndị na - emepụta ụlọ na - ewe obere afọ ". Dị ka ya si kwuo, echiche nke bọlbụ a "ebighebi" bịakwutere ya mgbe ọ na -aga United States ebe ọ nwere ike hụ ihe ama ama " bọmbụ narị afọA na-enwu ọkụ kemgbe ihe karịrị otu narị na Ngalaba Ọkụ Ọkụ na California na California, na-ede kwa ụbọchị La Vanguardia.
Site na ihe okike ya, Muros na-ekwupụta iji gosipụta na ngwaọrụ anyị nwere ike ịmalite site na idozi ya ma ọ bụ tigharịa ya. "Na Spain, anyị na-atụfu ihe dị ka 47 ọtụtụ nde bulbs kwa afọ, ọtụtụ n'ime ha nwere obere oriri na ụwa, ọnụ ọgụgụ a na-eru nde 7.000 kwa afọ. Anyị nwere ike iji bọlbụ a na-eji ndozi na ndezigharị wee zere ọnọdụ a, "ka o kwuru na La Vanguardia.
Muros kwuru na "bọlb ebighebi" nwere ike na-enwu n'etiti afọ 80 na 100. Muros na-akọwa na o jiri ule ndi otu ya nyocha oge ịme ihe, ikpo ọkụ na iru mmiri iji lelee nguzogide nke ngwaahịa ya. Ike nke bọlbụ a bụ n'ihi ihe ndị na - adịgide elektrọnik, nke a na - ejikwa ụlọ ọrụ ụgbọ elu, Muros kwuru. N’ezie, ego a ga-eji zụọ ahịa ga-adị 96,5% ma ọ bụrụ na e jiri ya na bọlbụ 100 watt, 68% tụnyere obere bọlbụ na-eji obere oriri. Ogbugbu a ga-egbutusikwa ikuku carbon dioxide site na 70%, ka O kwukwara.
N'akụkụ nke mpaghara sayensị, a chọrọ obi abụọ n'ihi na a na-atụle na bọlbụ IWOP nwere njirimara nke ngwaahịa ọrụ ebube. N'ime edemede nke 2012, akwụkwọ akụkọ Switzerland online " Ndị Medusa Akọwara na akụkọ a dị ka uzu. N’ezie, onye ọchụnta ego ekwuola na a na-eyi ya egwu ọnwụ maka ihe o mepụtara site na “usoro ga-ajụ ikwe ka ngwa ahịa ọhụrụ a na usoro omume mebie atụmatụ ọdịnihu nke neo-liberalism”. Na mgbakwunye, Benito Muros kwupụtara na ya na ndị ọrụ nkiri ahụ bụ Cosima Dannoritzer, onye edemede nke akwụkwọ “ Njikere itu ("Comprar, tirar, comprar"). Agbanyeghị, onye nke ikpeazụ gwara akwụkwọ akụkọ ahụ La Méduse amaghị ya wee sị: "" N’ezie na bọlbụ ya nwere ike ịnọ maka afọ 25, mana ọ bụghị naanị ya! Ngwurugwu ọkụ LED niile nwere, n'echiche, ndụ a! ".
N'ikpeazụ, agbanyeghị nkatọ maka ngwaahịa ya. Benito Muros gwụchara n'etiti ndị ikpeazụ nke 2014 entrepreneur Awards na Spain (Premio Emprendedores).
Nnwere Onwe na Oruru Ikpeazu - Jiddu Krishnamurti (Audio)